१ सय ६८ केजीकी सुत्केरी... :: सन्जिब बगाले :: Setopati
सन्जिब बगाले काठमाडौं,असार १४
‘हाम्रो समाजमा मोटो मान्छेलाई बच्चै हुँदैन भनेर हेप्ने गरिन्छ, त्यो गलत हो’ ३१ वर्षीया मेरिना हमालले दोस्रो सन्तानका रुपमा छोरी जन्माएपछि सेतोपाटीसँगको कुराकानीमा भनिन्।
सम्भवत नेपालमा पहिलो पटक १ सय ६८ केजी तौल भएकी महिलाले स्वस्थ बच्चा जन्माएकी छन्। तर उनलाई यो समाजले मोटो भनेर हेयको दृष्टिले हेरेको भने पटक्कै चित्त बुझेको छैन।
वरिष्ठ स्त्रीरोग तथा बाँझोपन विशेषज्ञ एवं ल्याप्रोस्कोपिक सर्जन डा. नुतन शर्मा नेतृत्वको टोलीले सफलतापूर्वक ती महिलाको शल्यक्रियामार्फत् बच्चा निकालेको हो।
डा. शर्मा नेतृत्वको चिकित्सकीय टोलीले करिब १ घण्टा १० मिनेट लगाएर नर्भिक अस्पतालमा शल्यक्रिया गरेको थियो।
‘मैले स्वस्थ बच्चा जन्माएकी छु, म पहिला धेरै आत्तिएकी थिएँ, बाँच्दिनँ होला भन्ने लागेको थियो’ मेरिनाले भनिन् ‘पहिलो बच्चा जन्माउँदा यति गाह्रो भएको थिएन। दोस्रो पटक कठिन भयो। मलाई डा. नुतन शर्माकै साथले सुरक्षित अनुभव भएको हो।’
आफूलाई मोटो छु भनेर हिनभावले सोच्न नहुने र बाहिर समाजमा निस्कनुपर्ने उनको सुझाव छ।
विदेशमा आफूभन्दा धेरै मोटा मानिस हुने भए पनि नेपालमा आफूलाई देख्दा हास्ने, फोटो र भिडियो खिच्नेजस्ता आचरण देखिएको उनले बताइन्।
मेरिनालाई सुत्केरी गराउन सम्भव भएकोमा स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. शर्मा निकै खुसी छन्। ‘१ सय २० केजीसम्मको तौल भएकी महिलालाई त सुत्केरी गराइएको थियो। तर यो मेरा लागि अर्को ठूलो चुनौति थियो’ शर्माले भनिन्।
मेरिनाको शल्यक्रियामा खटिएको स्वास्थ्यकर्मीको टिम।
मेरिनाका लागि अलग्गै टिम राखेर स्वास्थ्योउपचारमा खटिएको उनले बताइन्। ‘मोटो भएपछि अरु समस्या हुन्छन् तर उहाँलाई कुनै दिर्घ रोग थिएन। प्रत्येक पटक अल्ट्रासाउण्ड गर्नु परेको थियो, धेरै समस्या भएन।’
सुरुमा मेरिना निकै आत्तिएको डा. शर्माले बताइन्। ‘मलाई भेटेपिच्छे म बाँच्छु कि बाँच्दिन भनेर मात्रै सोध्नुहुन्थ्यो। हामीले उहाँलाई निरन्तर निगरानी गर्यौं। उहाँको अहिले अवस्था ठिक छ’ डा. शर्माले भनिन् ‘उहाँको छोरी जन्मिदा ताैल २ दशमलव ९ केजी थियो।’
नेपालमा स्वास्थ्य उपचारका क्षेत्रमा सबै सुविधा रहेको बताउँदै उनले विदेशमा सम्भव भएको उपचार सेवा यहाँ असम्भव नहुने बताइन्।
‘५/६ वर्ष पहिला पनि उहाँलाई मैले नै सुत्केरी गराएको हो’ डा. शर्माले भनिन् ‘त्यति बेला उहाँ ९६ केजीको हुनुहुन्थो, यसपटक उहाँको सुरुको परीक्षणमै तौल १४५ केजी थियो।’
अहिले आमा र बच्चा दुवैको स्वास्थ्य ठिक रहेको शर्माले बताइन्। उनले भनिन् ‘मोटोपना सुत्केरीको बाधक होइन।’
डा नुतन शर्मा र सुत्केरी मेरिना हमालसँग हामीले भिडिओ कुराकानी गरेका छौँ।
प्रकाशित मिति: आईतबार, असार १४, २०७७, २०:३३:००